Ahoana ny fomba hananganana orinasam-pitaterana mahomby izay ahazoana tombony tsara: Vaovao an-tsekoly amin'izao fotoana izao
Orinasa fitaterana: te-hahazo vola hitaterana olona sy entana amin'ny toerana iray ianao? Raha eny, ity lahatsoratra ity dia hitarika anao amin'ny fomba hanombohana orinasam-pitaterana.
Ny fanombohana orinasa fitaterana dia mitaky anao manapa-kevitra amin'ny karazana orinasa kasainao hamoronana, izay misy ny fanofana bisikileta, serivisy taxi, serivisy limousine, serivisy fitaterana manokana, tompona / mpandraharaha kamio, orinasam-pifamoivoizana, fandefasana an-dranomasina, fitaterana biby fiompy, sambo fitaterana, fitaterana an'habakabaka, fitaterana ara-pahasalamana na serivisy ho an'ireo zokiolona.
Ny fametrahana orinasa dia tokony ho faritana amin'ny filàna sy fifaninanana amin'ny faritra izay hanapahanao hevitra hiasa.
Raha vantany vao hitanao izay tianao ampitaina dia mila manomana ny fomba hanomezana ireo serivisy ireo ianao.
Dingana amin'ny fomba hanombohana orinasam-pitaterana
1. Fantaro ny karazana orinasa tadiavinao
Tompon'antoka tokana, orinasa tompon'andraikitra voafetra ve, sa orinasa tadiavinao hotanterahina? Ny tsirairay amin'ireo dia samy manana ny fahamendrehany sy ny toetrany.
Ataovy ny fikarohana ataonao ary fantaro izay karazana tadiavinao, satria samy manana ny fepetra takiana izy ireo.
2. Makà nomeraon'ny hetra federaly
Raha te hanana orinasa tompona orinasa tokana ianao dia azonao ampiasaina ny laharana fiarovana ara-tsosialy anao. Raha orinasa lehibe izany dia tsy maintsy mahazo federaly ianao Nomera ID an'ny mpampiasa (EIN).
Ity isa ity dia hahafahanao misoratra anarana amin'ny orinasanao ary hametraka ny toeranao amin'ny governemanta. Izay mpiasa karamanao dia tsy maintsy mampiasa an'io isa io rehefa mametraka ny hetrany, satria ity isa ity dia mampahafantatra ny asanao amin'ny governemanta federaly sy ny fanjakana.
3. Manorata drafitra fandraharahana
Ny drafitry ny orinasanao dia tokony ahitana ny anaran'ny orinasanao, ny karazan'orinasa manomboka anao ary ny toerana misy ny orinasanao.
Tsy maintsy manana anarana orinasa ianao, avy eo misoratra anarana amin'ny sekreteram-panjakana ao amin'ny fanjakanao ny anaranao.
Ny drafitry ny orinasanao dia mety misy:
Tanjona voafaritra ho an'ny orinasanao.
Drafitra iray momba ny fomba hanateranao ny serivisinao.
Famaritana ny volanao
Famaritana ny fandanianao vola, hatramin'ny vidin'ny asa, ny fikojakojana ary ny tanjonao.
Anaran'ny mpikambana mpitantana, ao anatin'izany ny mombamomba ny fifandraisana rehetra.
Tadidio fa a raharaham-barotra drafitra dia antontan-taratasy miasa izay afaka miova rehefa mandeha ny fotoana. Rehefa manomboka orinasa ianao, ny drafitry ny orinasanao dia mamaritra ny zavatra tianao hatao sy ny fomba anaovanao azy.
4. Raiso ny fahazoan-dàlan'ny orinasanao
Zahao amin'ny biraon'ny tanànanao any an-toerana hamaritana izay karazana fahazoan-dàlana ilainao hitantanana ara-dalàna ny orinasanao.
Mety mila manoratra ny asanao amin'ny sekreteram-panjakana koa ianao. Zahao ny tranokalan'ny fanjakanao raha mila ny mombamomba azy ireo ary aza misalasala manome antso ho an'ny biraony raha mila izany.
Ireto misy sasantsasany amin'ireo orinasa fitaterana azonao isafidianana:
1. Serivisy amin'ny taxi
Raha hisoratra anarana amin'ny maha mpamily anao dia manomboka amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny Uber ary kitiho ny bokotra "Become a Driver". Takiana aminao ny valiny fanontaniana fohy iray izay manomboka ny fizotrany.
Amin'ny maha mpamily anao dia mampiasa ny fiaranao ianao, ka somary ambany ny vidin'ny fanombohana.
Uber dia mitantana ny lafiny ara-bola rehetra amin'ny dia. Ny fandoavana ny mpamily dia isan-kerinandro. Amin'ny maha-mpandraharaha mahaleo tena azy ireo, ny mpamily dia mandray ny vidiny mihoa-pampana (lasantsy, fikojakojana, fiantohana sns.).
Tranonkala fanadihadiana Analytics SherpaShare dia nilaza fa ireo mpamily Uber na aiza na aiza (afa-tsy New York City izay avo indrindra ny taha) dia mahazo $ 8.80 ka hatramin'ny $ 11 isan'ora alohan'ny fakana ny isan-jaton'ny Uber.
2. Orinasa fitaterana ara-pahasalamana
Zava-dehibe ny fitaterana ara-pahasalamana fitaterana raharaham-barotra. Misy fomba maromaro hifantohana amin'ity orinasa ity. Ny sasany tsy mila mihoatra ny fiara mahazatra, ny fahazoan-dàlana hamily, ary ny taratasim-panaterana mafy.
Azonao atao ny mifantoka amin'ny fitaterana ireo zokiolona mankany amin'ny fanendrena ara-pitsaboana eo an-toerana, na, raha mipetraka amin'ny toerana lavitra ianao amin'ny tanàna, dia azonao atao ny mifantoka amin'ny fitondrana olona lavitra amin'ny fanendrena manokana any amin'ny hopitaly manerantany.
Raha manana fahazoan-dàlana EMT ianao, mari-pahaizana ara-pitsaboana hafa, na vonona ny hahazo azy ireo, dia azonao atao ny manomboka orinasa iray manao fifanarahana amin'ny hopitaly handroahana ireo marary any amin'ny toeram-pitsaboana hafa ho fitsaboana manokana.
Izany dia mitaky fitaovana manokana sasany toy ny fandefasana oksizenina ary angamba fiara afaka mitondra marary amin'ny seza misy kodiarana.
3. Serivisy limousine
Ny limousines dia tsy voafetra intsony amin'ny fiara mandratra Cadillac sy Lincoln. Androany ny limos dia misy Hummers milava kilometatra, Rolls Royce antitra, ary fiara misy lohahevitra misy fantsona mafana, pianô lehibe (feno piano), ary koa lohahevitra disko, fenoina ny baolina fitaratra sy ny dihin'ny mini.
Amin'ny ankamaroan'ny faritra Etazonia ary Kanada, orinasa manokana sy fahazoan-dàlana mamily fantatra amin'ny anarana hoe chauffeur's licence dia takiana amin'ny fiasa limousine service ary mitondra ny fiara.
Aza hadino ny manamarina ny lalàna mifehy ny faritra misy anao alohan'ny hanaovana fampiasam-bola.
Raha tsy afaka mahazo takelaka limousine ianao dia mety afaka mividy iray raha amidy, fa manantena hamoaka vola be, hatramin'ny $ 100,000.
Ny takelaka sy ny fahazoan-dàlana limousine dia be fangatahana, indrindra satria tsy mahazatra ny mahazo mpandraharaha enina.
4. Orinasa manao kamio
Betsaka ny entana nafarana izay mila entina any amin'ny tanàna sy tanàna maro mandra-pahatongany any amin'ireo mpivarotra enta-madinika sy mpanjifa farany.
Ny fitaterana entana sy ny fitaterana entana no rohy lehibe mampifandray ireo entana nafarana, novokarina ary novolena tamin'ny mpanjifa farany toa antsika. Raha tsy misy ireto kamiaobe sy tanker be mpampiasa ireto dia mety hijanona kely ny varotra.
5. Orinasa fitaterana sambo
Satria ny fitaterana an-dàlana no fomba fitaterana be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, ny tambajotram-pifamoivoizana sy ny fotodrafitrasa efa tsy ampy intsony mba hitazomana ny tsindry mafy.
Raha ny marina, ny fitohanan'ny fifamoivoizana atrehin'ireo mpandeha amin'ny sasany amin'ireo tanàna lehibe manerantany dia mitarika mpandraharaha hanome safidy tsara kokoa amin'ny fitaterana an-dàlana.
Ny fitaterana rano dia mijanona ho iray amin'ireo fitaovam-pitaterana be mpampiasa indrindra eto an-tany an-dalam-pandrosoana.
6. Orinasa fitaterana fiompiana
Ity karazana asa fitaterana ity dia tsy mitaky fahazoan-dàlana manokana amin'ny fitaterana soavaly manokana ho an'ny mpanjifa, raha tsy miditra amin'ny raharaham-barotra habe ara-barotra ianao izay tena mila traikefa mitovy na omby ho an'ny mpanjifa mety hatoky ny fahaizanao mitondra ny biby, ary mila ianao hahafantaranao ny fitsipika mifehy ny fitaterana ny fiompiana amin'ny fiampitana ny tsipika fanjakana.
Na dia tompon'andraikitra amin'ny fananan'ny biby fiompy azy ireo aza ny tompon'ny biby fiompy, dia ho fantatrao ny fitsipi-piompiana amin'ny fanjakana hidiranao.
Ny ankamaroan'ny fanjakana dia manana farafahakeliny farafahakeliny takiana amin'ny fitsapana areti-mifindra (ao anatin'izany ny fanadinana ara-pahasalamana) sy / na ny vaksiny alohan'ny hidirany amin'ny fanjakany.
Ny programa momba ny vatsim-pianarana Lukasiewicz any Polonina 2019 | Fampiharana feno
Daty famaranana ny fisoratana anarana NECO 2020 ary daty famaranana ny fisoratana anarana Jona / Jolay NECO
Firaisana Bitch Media Fellowship ho an'ny mpanoratra 2020 sy ny fomba fampiharana amin'ny Internet
CRUTECH Safidy faha-2 / Fanatanjahan-tena momba ny fidirana mivantana - 2016/17
Mangataha ho an'ny Sterling Asset Management & Trustees Limited Job Vacancy ho an'ny Fleet & Operations Officer
Floyd Mayweather Net Worth 2020, Instagram, Facebook ary Twitter
Kandidà sy ray aman-dreny mangataka fanafoanana ny UTME 2016
Tags: drafitra fandraharahana fitaterana bus, drafitra fandraharahana ho an'ny asa fitaterana any nigeria, fandalinana azo atao momba ny asa fitaterana any nigeria pdf, orinasam-pitateram-panjakana eo amin'ny nigeria, tolo-kevitra momba ny asa fitaterana any Nigeria, orinasam-pitaterana an-dàlana any nigeria pdf, asa fitaterana any abuja, asa fitaterana any nigeria nairaland
« PTI Portal www.portal.pti.edu.ng Jereo ny fanavaozana ny fampiharana farany
18 Zava-misy mahafinaritra momba ahy tiako ho fantatra ny rehetra »